Wasaaradda Caafimaadka oo ka Baaraysa cudurka Caronavirus Ajaanibta dalka soo galaysa – Banaadir weyne
Dowladda Faderaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in ay dabagal joogta ah ku hayso xaalada ajaaniib dalka soo gashay kuwaas oo laga baaray cudurka Caronavirus balse la xaqiijiyey in aysan qabin.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa bayaan ay ka soo saartey xanuunkaan dilaaga ah Coronavirus,waxa ay ku sheegtay in aysan jirin khatar Soomaaliya ka jirta oo la xariirta Cudurkaan.
Hadalka wasaaradda ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe la hadalhayey in uu Muqdisho yimid shaqsi la xusay in uu Soomaali yahay kaasoo ka yimid magaalada Wuhan, balse la hubiyey in uusan ku dhicin cudurka.
Qoraalka W.Caafimaadka Halkaan ka aqriso.
OGEYSIIS: CURDURKA CORONAVISRUS
Heerarka kala duwan ee Wasaaradaha Caafimaadka (Federaal & Maamul Goboleed) waxay heegan buuxda galiyeen shaqaalahooda xarumaha dalka laga soo galo, iyadoo ruux walba uu musaafir ah uu marayo baarista asaasiga ah ee lagu hubinaayo xaaladiisa caafimaad sidoo kale la xaqiijinaayo socdaalka iyo goobaha uu soo maray.
Waxaan ku adkeeynaynaa dhamaan warbaahinta iyo dadweynahaba in warbixinta cudurka cronovirus aan laga qaadin meel aan Wasaarada Caafimaadka ahayn. – Somali Weyn News